Mukutsvaga KwemaWiricheya Akanakisa - Akakurudzirwa Chair
Iwe hauzomboziva kuti chii hupenyu hwuchakanda nzira yako. Kunyangwe isu tisingambofunge kuti tiri kuzoda a wiricheya, kunyangwe kwenguva pfupi, chero chinhu chinogona kuitika chero nguva. Iwe unogona kukodzera uye kushingaira rimwe zuva uye kuoma mitezo rinotevera. Tsaona kana chirwere chinogona kukukanganisa zvakanyanya kufamba.
Hatimbonyatsofunga nezve mukana iwoyo, asi uripo uye unowedzera, patinokura. Kana nguva iyoyo ikasvika, uchiziva kuti ndeapi marudzi e mavhiripu zviripo zvinogona kubatsira zvakanyanya.
Bhatiri Rinobatsira Wiricheya
Chaizvoizvo, kune maviri marudzi e mavhiripu inowanikwa, mhando yemanyorerwo uye mhando yemagetsi inofambiswa. Kusarudza iyo chaiyo kunoenderana nemari yako uye kuti ingani rubatsiro rwauchazoda. Chinyorwa mavhiripu zvakadhura zvakanyanya uye zviri nyore kutakura zvichienzaniswa neyakagadzirwa nemagetsi.
Manual mawiricheya uya nezvakawanda zvakasiyana maficha nemaoko nemarestrests anogona kugadziridzwa, tilting, zvigaro zvemachira zvinofema, vanobata makapu uye basa rinorema mafuremu evashandisi vanorema. Zvimwe zvevakakurumbira wiricheya vagadziri vanosanganisira Karman, Medline, Nova, Pride, Invacare uye ShopRider.
wiricheya Sarudzo Kubva pane Zvaunoda
Paunenge uchitsvaga wiricheya, funga zvaunoda kwete kuti chii mumwe munhu kushandisa chigaro chavo che. Funga nezvehurefu hwako, huremu uye kufamba kukwana. Iwe uchave chii kushandisa ndezvei?
Uchave kangani kushandisa ? nezvimwewo.
Kana iwe uri wekunze mhando, saka iyo wiricheya uchafanirwa kufamba nemhando dzakasiyana dzenzvimbo uye iwe uchazoda matai mahombe kuti uve nekugadzikana kwakanaka.
Pane mavhiripu kune ese maumbirwo, hukuru uye nematanho kubva kuvana vadiki kune avo vanopfuura 6 'kureba. Zvimwe zvigaro zvakavakirwa zvakaringana kuwana huremu hunosvika mazana mashanu emapaunzi. mavhiripu inogona kugadziridzwa kuti ikwane chero chinodiwa.
Unofarira mitambo here? Kana iwe uchida mitambo yakadai setenisi, basketball, kana chero mhando yemitambo inoshanda, unogona kuwana cheya yekubvumidza iwe kutora chikamu mune zviitiko zvaunoda.
Nyaradzo ndiyo Nhamba 1 Yekutanga Kune Mumwe Nomumwe
Vatengesi vepamhepo vane sarudzo hombe yezvigaro zvinoenderana nezvako zvese zvaunoda. Kunyangwe iwe ukaona iyo yakakwana modhi pamhepo, iwe uchazoda kutsvaga chitoro chiri padyo iwe chaunogona kuzviyedza usati waita yekupedzisira kutenga. Nyaradzo yakakosha kwazvo, kunyanya kana uchironga kuve mairi kwenguva yakareba.
Zvakawanda zvakasiyana magetsi maguru vari pamusika uye iwe unogona kuwana imwe inokodzera zvese zvaunoda. Zvimwe zvemasachigaro emagetsi zvinosanganisira, tilt kana kuzara akarara kumashure, kukwirisa gumbo, kukwira kusvika ku10mph.
Zvese izvi maficha zvakagadzirirwa kukupa iwe kufamba uye nyaradzo yauri kutsvaga uye inonyanya kukosha kuzvimiririra kwako. Kana iwe usingakwanise kufamba zvakachengeteka a wiricheya yemawoko, inogona kunge iri nguva yekutarisa musimba wiricheya kuti uwanezve yako kufamba uye rusununguko.